मकर संक्रान्तिमा शुक्रको विशेष योग बन्दै, चम्किदैछ यी राशिकाे भाग्य
January 12, 2022 N88LeaveaComment on मकर संक्रान्तिमा शुक्रको विशेष योग बन्दै, चम्किदैछ यी राशिकाे भाग्य
काठमाडाैं । जनवरी १४ मा सूर्य मकर राशिमा प्रवेश गर्नेछ। त्यस दिन पौष शुक्लको द्वादशी हुनेछ । यस्तो अवस्थामा यस दिन सूर्यसँगै भगवान विष्णुको पनि विशेष पूजा गरिन्छ । यसका साथै यस दिन गंगा स्नान, गंगासागर स्नान र दानले पनि लाभ मिल्नेछ। यस पटक मकर संक्रान्तिको सन्दर्भमा काशीका विद्वानहरूले यस दिन सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म पवित्र अवधि […]
श्री पशुपतिनाथकाे दर्शन गरी हेर्नुस् पुस २९ गते, बिहीबारको राशिफल, सबैका लागि विशेष
January 12, 2022 N88LeaveaComment on श्री पशुपतिनाथकाे दर्शन गरी हेर्नुस् पुस २९ गते, बिहीबारको राशिफल, सबैका लागि विशेष
वि.सं. २०७८ साल पुस २९ गते, बिहीबारको राशिफल मेष राशि पद्धतिमा सुधार आउनेछ । तत्काल कुनै लाभ हुनेछैन। नराम्रा कुराहरू हुनेछन्। घर बाहिर सोधपुछ हुनेछ। विरोध हुनेछ । आर्थिक नीतिमा परिवर्तन हुनेछ । लगानीले राम्रो प्रतिफल दिनेछ । काममा प्रभाव बढ्नेछ। कुनै पनि पुरानो रोग अवरोध को कारण हुन सक्छ। सामाजिक कार्य गर्ने अवसर मिल्नेछ […]
ललिता निवास प्रकरण- देउवा र प्रचण्डका कारण नेपाल र भट्टराईमाथि मुद्दा नचलेको ठहर
January 12, 2022 January 12, 2022 N88LeaveaComment on ललिता निवास प्रकरण- देउवा र प्रचण्डका कारण नेपाल र भट्टराईमाथि मुद्दा नचलेको ठहर
काठमाडौं ।बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुद्दा नचलाई मंगलबार हदम्याद गुज्रिएको छ। राजनीतिक शक्ति केन्द्रको दबाबमा प्रहरी को केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग ९सीआईबी०ले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन विभागमै फिर्ता गरिएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराईसम्म उक्त जग्गा हिनामिनामा मुछिएका छन्। तर, राजनीतिक नेतृत्व विरुद्ध मुद्दा चलाउँदा सत्ता गठबन्धन […]
निर्वाचन समयमै नगर्ने देउवा सरकार र गठबन्धन दलकाे षडयन्त्र ?
January 12, 2022 N88LeaveaComment on निर्वाचन समयमै नगर्ने देउवा सरकार र गठबन्धन दलकाे षडयन्त्र ?
काठमाडौं । राजनीतिक अस्थिरताले संसदीय व्यवस्थामा प्रश्न उठ्ने परिस्थिति बन्न थालेको छ । विगतको संसदीय राजनीति जसरी अस्थिर र बद्नाम हुनुको कारण राजनीतिक दलको भूमिका र गतिविधि नै प्रमुख जिम्मेवार थिए । त्यसरी नै अहिले नया“ संविधान २०७२ मा जारी भएपछि पनि त्यही पुरानो भूमिकामा देखिन थालेका छन् । राजनीतिक दलका गतिविधिले गर्दा २०५४ सालको […]
देशको अस्मितामाथि प्रहार हुँदा किन बोल्दैन देउवा सरकार ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
January 12, 2022 N88LeaveaComment on देशको अस्मितामाथि प्रहार हुँदा किन बोल्दैन देउवा सरकार ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
काठमाडौं । आफ्नो भारतले अतिक्रमण गर्दा सरकार निरिह भएर टुलुटुलु हेर्न बाध्य छ । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतले हडपेको ६ दशक नाघिसक्यो । लिपुलेक क्षेत्रमा उसले सडक विस्तार गर्न छाडेको छैन । त्यति मात्र होइन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त नेपालले राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सामा रहेको लिपुलेक क्षेत्रमा सडक विस्तार गरेको सगर्व बताउँदै नेपालको […]
भीआईपीलाई धमाधम कोरोना, यी ठूला नेताहरू थला परे
January 12, 2022 N88LeaveaComment on भीआईपीलाई धमाधम कोरोना, यी ठूला नेताहरू थला परे
काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, सरकारका मन्त्री तथा सचिवसहितका उच्च तहका भीआईपीहरूलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेक्रम बढ्दै गएको छ । पार्टीको महाधिवेशन सकाएर उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति र सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा सहभागी भएपछि गत शनिबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । दाहालमा संक्रमण पुष्टि भएपछि सोही बैठकमा सँगै रहेका […]
मिल्ने भए केपी ओलीलाई यो देशका ढुंगामाटो, रुख र बुट्यानले पनि भोट हाल्छन्
January 12, 2022 N88LeaveaComment on मिल्ने भए केपी ओलीलाई यो देशका ढुंगामाटो, रुख र बुट्यानले पनि भोट हाल्छन्
केपी ओली र शशक्त नेताहरुको टिम झापा भनेको नेपालका अनेक राजनीतिक आन्दोलनको केन्द्र हो । झापाले देशलाई एकसे एक सक्षम नेता दिएको छ । ती मध्ये अग्रणी हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली । केपी ओलीले राजनेताको उचाई हासिल गरिसक्नुभएको छ । नेपालमा जिवित अवस्थामै राजनेताको उचाई हासिल गर्ने नेता केपी ओली नै हो । देश र […]